ယူအီးအက်ဖ်အေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေ ပြောင်းလဲသင့်ပြီလား…ချန်ပီယံလိဂ်လက်ရှိချန်ပီယံက အဆင့် ၈နေရာရောက်နေ
September 11, 2019 phyo champion_league, News 0
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေက လာမယ့်အပတ် အင်္ဂါနေ့မှာ စတင်ကစားကြတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေဟာ ၂၀၂၀ မေလ အစ္စတန်ဘူမှာ အောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ ခရီးတွေ စတင်ထွက်ခွာကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယမန်နှစ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ လီဗာပူးက တော့တင်ဟမ်အသင်းကို အနိုင်ရရှိကာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယူအီးအက်ဖ်အေရဲ့ယမန်နှစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ လီဗာပူးအသင်းက ထိပ်ဆုံးမှာ မရပ်တည်နိုင်ခဲ့ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ သူတို့ကျော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းထက်တောင် ၁ မှတ် လျော့နေခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် ၁၆သင်းရှုံးထွက်အဆင့်မှာပဲ အေဂျက်စ်အသင်းရဲ့ ထင်မှတ်မထားဖွယ် ခြေစွမ်းတွေကြောင့် ရှုံးနိမ့်ပြီး စောစောစီးစီးလှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်က အဆင့် ၁ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဒီအဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာကာလ ချန်ပီယံလိဂ်မှတ်တမ်းတွေကို အခြေခံထားတာဖြစ်ကာ ၂၀၁၆-၁၇ ခုနှစ်က လီဗာပူးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့် ၈ နေရာမှာသာ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။
ဒီအချက်တွေက လီဗာပူးအသင်းကို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်၊ ဘာစီလိုနာတို့လို အသင်းတွေရဲ့နောက်မှာသာ ရှိစေခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ယူအီးအက်ဖ်အေရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၂၉ မှတ်သာ ရရှိခဲ့တဲ့ လီဗာပူးက အဆင့် ၈ နဲ့ ၂၆ မှတ်သာ ရရှိခဲ့တဲ့စပါးအသင်းက အဆင့် ၁၂ နေရာမှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ချန်ပီယံမဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အမှတ်အများဆုံးရရှိတဲ့အသင်းအဖြစ် ရမှတ် ၃၀ ရရှိခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာက အင်္ဂလန် ၂ သင်းရဲ့အထက် အဆင့် ၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ ယမန်နှစ်က အုပ်စုအဆင့် ပွဲစဉ်တွေမှာ စပါးနဲ့ လီဗာပူးတို့က သရေကျတဲ့ပွဲစဉ်တွေ၊ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေ ရှိခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာကတော့ အဆိုပါ အင်္ဂလန်အသင်း ၂ သင်းထက် ရလဒ် ပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ယခုလို ကွာဟနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားပိုင်ရှင် လီဗာပူးအသင်းဟာ လာမယ့်အပတ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲစဉ် အဖွင့်ပွဲအဖြစ် နာပိုလီအသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တွေမှာတေ့ာ ဆဲလ်ဘတ်၊ ဂျန့်ခ်အသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာလည်း လီဗာပူးအသင်းပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားပိုင်ရှင် ထပ်ဖြစ်နိုင်ဦးမလား ? ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်ကရော ?
ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုအဆငျ့ပွိုငျပှဲတှကေ လာမယျ့အပတျ အင်ျဂါနမှေ့ာ စတငျကစားကွတော့မှာ ဖွဈပွီး ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှဟော ၂၀၂၀ မလေ အစ်စတနျဘူမှာ အောငျပှဲခံနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြကိုယျစီနဲ့ ခရီးတှေ စတငျထှကျခှာကွရတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ယမနျနှဈဗိုလျလုပှဲမှာ လီဗာပူးက တော့တငျဟမျအသငျးကို အနိုငျရရှိကာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယူအီးအကျဖျအရေဲ့ယမနျနှဈအဆငျ့သတျမှတျခကျြမှာတော့ လီဗာပူးအသငျးက ထိပျဆုံးမှာ မရပျတညျနိုငျခဲ့ဘဲ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ သူတို့ကြျောဖွတျခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးထကျတောငျ ၁ မှတျ လြော့နခေဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျ ၁၆သငျးရှုံးထှကျအဆငျ့မှာပဲ အဂေကျြဈအသငျးရဲ့ ထငျမှတျမထားဖှယျ ခွစှေမျးတှကွေောငျ့ ရှုံးနိမျ့ပွီး စောစောစီးစီးလှညျ့ပွနျခဲ့ရတဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈက အဆငျ့ ၁ နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
ဒီအဆငျ့ သတျမှတျခကျြတှကေ ပွီးခဲ့တဲ့ ၅ နှဈတာကာလ ခနျြပီယံလိဂျမှတျတမျးတှကေို အခွခေံထားတာဖွဈကာ ၂၀၁၆-၁၇ ခုနှဈက လီဗာပူးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေးဇယားမှာ အဆငျ့ ၈ နရောမှာသာ ရပျတညျခဲ့တာပါ။
ဒီအခကျြတှကေ လီဗာပူးအသငျးကို ရီးရဲလျမကျဒရဈ၊ ဘာစီလိုနာတို့လို အသငျးတှရေဲ့နောကျမှာသာ ရှိစခေဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ယူအီးအကျဖျအရေဲ့အဆငျ့သတျမှတျခကျြမှာတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ၂၉ မှတျသာ ရရှိခဲ့တဲ့ လီဗာပူးက အဆငျ့ ၈ နဲ့ ၂၆ မှတျသာ ရရှိခဲ့တဲ့စပါးအသငျးက အဆငျ့ ၁၂ နရောမှာသာ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ခနျြပီယံမဖွဈခဲ့ပမေယျ့ အမှတျအမြားဆုံးရရှိတဲ့အသငျးအဖွဈ ရမှတျ ၃၀ ရရှိခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာက အင်ျဂလနျ ၂ သငျးရဲ့အထကျ အဆငျ့ ၃ နရောမှာ ရပျတညျနခေဲ့ပါတယျ။ ယမနျနှဈက အုပျစုအဆငျ့ ပှဲစဉျတှမှော စပါးနဲ့ လီဗာပူးတို့က သရကေတြဲ့ပှဲစဉျတှေ၊ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲတှေ ရှိခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာကတော့ အဆိုပါ အင်ျဂလနျအသငျး ၂ သငျးထကျ ရလဒျ ပိုကောငျးခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ပဲ အဆငျ့သတျမှတျခကျြမှာ ယခုလို ကှာဟနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျဖလားပိုငျရှငျ လီဗာပူးအသငျးဟာ လာမယျ့အပတျမှာ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုပှဲစဉျ အဖှငျ့ပှဲအဖွဈ နာပိုလီအသငျးနဲ့ ရငျဆိုငျကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ နောကျထပျပှဲစဉျတှမှောတေ့ာ ဆဲလျဘတျ၊ ဂနျြ့ချအသငျးတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီမှာလညျး လီဗာပူးအသငျးပဲ ခနျြပီယံလိဂျဖလားပိုငျရှငျ ထပျဖွဈနိုငျဦးမလား ? ပရိသတျကွီးရဲ့ အမွငျကရော ?
ဗလန်စီယာနဲ့ပွဲကို လွဲချော်ရမယ့်မက်ဆီ ချန်ပီယံလိဂ်အဖွင့်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့လည်း မသေချာ